PIXL dia azo inoana fa ny fivoaran'ny LEGO | Famoronana an-tserasera
LEGO dia orinasa iray afaka namerina namorona ny tontolon'ny kilalao hanintonana ny sain'ny zaza an-tapitrisany, ary ireo izay tsy izany, hamoronana, hanangana ary hanangana izay rehetra mandalo ny eritreritrao. SAINGY izao dia PIXL no te hanana fivoarana miaraka amina karazana sakana vaovao.
Azontsika atao koa ny milaza fa manome toerana bebe kokoa ho an'ny famoronana amin'ny maha-izy azy sakana vitsivitsy azontsika lakaoly amin'ny hafa misaotra ny rafitry ny andriamby. Toy ny hoe teo alohan'ny Minecraft mihitsy isika, lalao fanamboarana izay ahafahantsika manangana izay rehetra tonga ao an-tsaina noho ny sakana.
PIXL dia amin'izao fotoana izao tetikasa Kickstarter mifandraika amin'ny rafitra tsy manam-petra ny vato fananganana. Ireo sakana ireo dia manana ny mampiavaka azy sy ny fahaizany mifandray amin'ny hafa na aiza na aiza. Azontsika atao koa ny manangana karazana endrika 3D tadiavintsika, na manao art de pixel amin'ny 2D aza, raha mbola mitazona ny masony tsy hijery ny sisiny isika.
Ireo cubes de PIXL mifandray amin'ny alàlan'ny andriamby ary izany no antony nanatanterahan'ilay tetikasa tao amin'ny Kickstarter ny tanjony. Andian-tsoratra andriamby izay noforonin'ny The McLachlan Brothers. Ireo sakana izay milalao amin'ny fomba tonga lafatra amin'ny saintsika mpamorona rehefa mahatsikaritra fa izy ireo dia afaka mampifanaraka amin'ny fomba tonga lafatra ny zavatra rehetra tiantsika haorina na foraintsika.
I mean, mametraka sakana PIXL eo akaikin'ny iray hafa izahay, ary hiara-hipetraka avy hatrany izy roa. Avy eo isika dia milalao ny loko isan-karazany amin'ireo cubes tsirairay ireo, ary afaka manomboka manao sary sy mamorona tarehimarika, trano ary maro hafa isika. Ny fetra dia napetraky ny eritreritsika.
Hanana isan-karazany 52 loko isan-karazany ary habe efatra hanombohana manome lanja ny fisainantsika. Ny tetikasa ao amin'ny Kickstarter manana an'ity rohy ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » PIXL, na manamboatra ny «LEGO» amin'ny ho avy